မင်းသား FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာမင်းသား FX ကို EAမင်းသား FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် မင်းသား FX ကို EA 3
စျေးနှုန်း: $ 1,000 (STARTER PLAN၊ 1 USERNAME၊ 20 LIVE & န့်အသတ်မဲ့ Demo စာရင်းများအတွက်စျေးလျှော့စျေး)
ငွေကြေးစွမ်း: ကုန်စည်, ရွှေ, ငွေ, ရေနံအပါအဝင်မဆို, Metals
သတ်မှတ်ချိန်: M5, M15 နှင့် M30
မှတ်စု: ယခုလက်ရှိ Prince Fx Expert Advisor ၏4အမျိုးအစားများရှိသည်။
- စတင်စီစဉ်သောအစီအစဉ်: 1 Username, 20 Live & Unlimited Demo Accounts၊ ပုံမှန်စျေး - $ 2,500, လျှော့စျေး: $ 1,000
- စံအစီအစဉ်2အသုံးပြုသူအမည်, 40 တိုက်ရိုက် & Unlimited Demo Accounts ကို, ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 3,900
- နောက်ဆုံးအဆင့်အစီအစဉ်5အသုံးပြုသူအမည်, 80 တိုက်ရိုက် & Unlimited Demo Accounts ကို, ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 5,900
- ကော်ပိုရေးရှင်းအစီအစဉ်: 10 အသုံးပြုသူအမည်, Unlimited တိုက်ရိုက် & Demo Accounts ကို, ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 9,900
Update: စက်တင်ဘာလ4တွင်ထွက်ရှိသောအမြတ်အစွန်းသစ် version Prince Fx EA v2019
မင်းသား FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4များအတွက်အစွမ်းထက် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
မင်းသား FX ကို EA တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး မှဖန်တီးသည် Shehzada Behram နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသူ့အဖွဲ့။ ဒီ developer များ Forex စက်ရုပ် ဒီထူးခြားတဲ့ပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်မှ, အနှစ်အဘို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပြီ။
ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးတစ်ဦးကမ်းလှမ်း အပြည့်အဝ automated ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ မြင့်မားတဲ့ပြန်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်း။ သို့သျောလညျးမွငျ့မားပြန်လာပြီးအတူမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ (အဆုံးစွန်သောအများအားဖြင့်အခကြေးငွေမယူပဲအခမဲ့) ပုံမှန်အမြတ်အစွန်းရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်အခြားကုန်သွယ်အကောင့်အမြတ်အစွန်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်စေအကြံပြုပါသည်။
မင်းသား FX ကို EA Metatrader4(MT4) platform ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကုန်သွယ် software ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Forex EA ၏အားလုံးငွေကြေးကုန်စည်အပါအဝင်အားလုံး, ရွှေ (XAUUSD), Silver, (XAGUSD), ရေနံ (WTI & Brent) နှင့် Metals ကုန်သွယ်မှု။
ကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. အကြံပြု EURUSD, EURGBP, EURJPY, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, NZDUSD နှင့် XAUUSD (ရွှေ) 15 နှင့် 30 မိနစ်အချိန်ဘောင်ပေါ်မှာ။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် equity ထိန်းချုပ်ရေး သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအန္တရာယ်အစာစားချင်စိတ်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည့်ယန္တရား။
အများအပြားကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်တွင်အမြတ်အစွန်းလျင်မြန်စွာအထိဖြည့်စွက်, တစ်နေ့လျှင်အများအပြားရာခိုင်နှုန်းသကဲ့သို့မြင့်မားဖြစ်ပြသ တစ်လလျှင် 100-300% အမြတ်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးပတ်အတွင်းသင့်အကောင့်ကိုနှစ်ဆအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ထိုအရပ်မှတစ်ဦး "အခမဲ့စီးနင်း" ကိုခံစားအပေါ်ဆုတ်ခွာဖို့အစာရှောင်ရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ကြှနျုပျတို့ယုံကွညျသညျ မင်းသား FX ကို EA အချိုးအန္တာရာယ်မှတို့သည်ကြီးစွာသောဆုလာဘ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးအလွန်တည်ငြိမ်ကြီးထွားလာအမြတ်ကွေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်အချိန်ကိုင်ပြီးအဆိုပါအနေအထားဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်း, နေ့အပြီးတစ်ရက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စေသည်။
မင်းသား FX ကို EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်များကတီထွင်ခဲ့သည်!
လွယ်ကူသောအသံ? နည်းပညာပိုင်းကဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ gauging နှင့်လက်ျာယခုအချိန်တွင်အပေါ်သရုပ်ဆောင်လူတိုင်းသဘာဝကျကျမလာပါဘူး။ သင်ကူညီနည်းပညာလည်းမရှိသည့်အခါသို့သော်အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူပြီးအကျိုးအမြတ်အခွင့်အလမ်းဖြုန်း !! ဟုတ်ပါတယ်, ကွန်ပျူတာ whizzes တကယ်ကဒီအချိန်ပွုပါပွီ။
၏အသုံးပြုမှုကို Make မင်းသား FX ကို EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် မင်းသား FX ကို EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာနှင့်ပရိုဂရမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ မင်းသား FX ကို EA အမြတ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်သည့်အခါအပေါ်ကျန်ရှိနေခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်သပိတ်ရှာဖွေနေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ မင်းသား FX ကို EA စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကင်းမဲ့ပြီးလုံးဝတွက်ချက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး spur-of-the- ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မယူပါလိမ့်မယ်။
မင်းသား FX EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
မင်းသား FX ကို EA ရဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကုန်သွယ်မှုယုတ္တိဗေဒတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောအကောင့်လက်ကျန်ငွေအတွက်ရလဒ်များသောအတန်းများစွာအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှု Setup ကိုတွေ့။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကရံဖန်ရံခါစျေးကွက်သင်တို့တဘက်၌လှည့်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါ Forex EA ၏အမြတ်အစွန်းအတွက်ရာထူးပိတ်ဖို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
စျေးကွက်ကအမြဲကအရမ်းခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, သင်ကသင့်ရဲ့ Pre-defined ရှယ်ယာရပ်တန့် level မှာထွက်ရပ်တန့်ကြောင်းသတိပြုမိရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖွယ်ရှိဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုစွန့်ခွာဖြစ်ပျက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေကုန်သွယ်မှုနဲ့ငါတို့ဘက်မှာလေးသာမှုရကတည်းက, ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းပေးရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းလည်းမရှိ။
မင်းသား FX ကို EA အဖြစ်ပွဲစား ECN-type အမျိုးအစားအလို့ငှာပွညျ့စုံသုံးပြီးအတူအားလုံး MetaTrader4ပွဲစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
စာရေးအရွယ်အစားသင့်ရဲ့အကောင့်ကို Balance သည်နှင့်အညီခန့်ထားခံရဖို့ဖြစ်ပါသည်: ပုံမှန်အားဖြင့် 1000 အမေရိကန်ဒေါ်လာထိုသို့ 0.02 စာရေးဖြစ်သင့်သည်။ အများဆုံးပျံ့နှံ့အလုံးစုံတို့အဘို့3pips5pips ဖြစ်သည့်ရွှေ, မှလွဲ. အားလုံးအကြံပြုသည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: မင်းသား FX ကို EA 60 ၏တစ်နေ့တာငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်အတူလာသည်။ ရောင်းချသူသည်ချက်ချင်းငွေပြန်အမ်းမည်။ သို့သော်တောင်းဆိုမှုသည်ရောင်းချသူများ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုကောင်းစွာကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
မင်းသား FX ကို EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 1,000 (starter အစီအစဉ်) မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်မင်းသား FX EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဒုံးပျံကို EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အပြည့်အဝ automated ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ
မင်းသား Forex EA ၏
မင်းသား Forex EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မင်းသား FX EA ၏ v2
မင်းသား FX EA ၏ v3
မင်းသား FX EA ၏ v4
မင်းသား FX စက်ရုပ်
ငျးသား FX EA ၏ - 4% OFF Sales ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း - METATRADER 506.2 အာဏာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး performance UPDATE + 50% MONTHLY Return (! အစစ်အမှန် TRADING ACCOUNT ကို) LIMITED တစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော! မင်းသား FX EA ၏ - Metatrader4များအတွက်အစွမ်းထက် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ: https://www.bestforexeas.com/prince-fx-ea-review/ မင်းသား FX EA ၏ created တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဖြစ်ပါသည် Shehzada Bezram နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသူ့အဖွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Forex စက်ရုပ်၏ developer များကဤထူးခြားသောပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့, နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကမ်းလှမ်းမှု... ဆက္ဖတ္ရန္
ငျးသား FX EA ၏ - ပါဝါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - ဒီဇင်ဘာ 2017 UPDATE ခရစ္စမတ်အထူးကမ်းလှမ်းချက် - 50% OFF Sales ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! မင်းသား FX EA ၏ယခုလျှော့စျေးနှုန်းမှာမရရှိနိုင်ပါ! ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/prince-fx-ea-review/ မင်းသား FX EA ၏ Shehzada Behram နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသူ့အဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်။ ဒီ Forex စက်ရုပ်၏ developer များကဤထူးခြားသောပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့, နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးမြင့်မားပြန်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုအပြည့်အဝ automated ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာပေးထားပါတယ်။ သို့သျောလညျး... ဆက္ဖတ္ရန္
ငျးသား FX EA ၏ - ပါဝါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - ဖေဖော်ဝါရီ 2018 UPDATE NEW ငျးသား FX EA ၏ V3, သတင်းချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော! ငျးသား FX EA ၏ V3 ဖြန့်ချိပြီးပါပြီ! https://www.bestforexeas.com/prince-fx-ea-review/ အပ်ဒိတ်များ: ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get အဆိုပါနောက်သို့ဦးရေပြားမဟာဗျူဟာတိုးတက်လာသော, 10% -15% နောက်ထပ်အန္တရာယ်အချက်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ entry အချက်များ, တိုးတက်3ပိုပြီးပွဲစားများနှင့်အတူစမ်းသပ်ခံရနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အပေါငျးတို့သစာရင်းဝင်ပွဲစားများနှင့်အတူ EA ၏များ၏ Compatibility ကိုသေချာကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ တူညီသည့်စနစ်အတွင်း Swing မော်ဒယ်နှင့် Rapid Scalper မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အခုတော့အားလုံးတဦးတည်းကုန်သွယ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖြစ်လာခဲ့သည်။ Swing များအတွက်ဘုံ features နဲ့... ဆက္ဖတ္ရန္